सामान्य अबस्थामा सास फुल्छ ? गम्भीर समस्या हुनसक्छ ! - Bidur Khabar
सामान्य अबस्थामा सास फुल्छ ? गम्भीर समस्या हुनसक्छ !
विदुर खबर २०७४ फागुन २ गते १४:२३
काठमाडौं । हिँड्दा अक्सर सास फुल्ने गर्छ । कसैलाई थोरै हिँड्दैमा सास फुल्छ भने कसैलाई दौडिँदा मात्र । यो समस्या जोकोहीलाई हुन सक्छ । बढ्दो उमेरसँगै मानिसमा यो समस्या बढेर जान्छ । तर, यदि सामान्य हिँडडुलमा पनि सास फुल्छ भनेचाहीं विशेष सजगता अपनाउन जरुरी छ । अन्यथा, यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
सास फुल्नु भनेको शरीरमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको आपूर्ति हुन नसक्नु हो ।
जब शरीरमा अक्सिजनको कमीका कराण फोक्सोले राम्ररी अक्सिजन लिन सक्दैन, त्यतिबेला फोक्सोले बाहिरी वातावरणबाट सास लिने प्रयत्न गर्छ । त्यही क्रममा फोक्सोले छिटो-छिटो सास लिन खोज्दा फोक्सोमा अनावश्यक दबाब पर्ने गर्छ, जसका कारण सास फुल्छ ।
सामान्यतया यो समस्या दुई तरीकाबाट रोक्न सकिन्छ । पहिलो, शरीरमा अक्सिजनको आपूर्तिका लागि बाहिरबाटै अक्सिजन दिने । दोस्रो, समस्यालाई नियन्त्रणको कोशिस गर्ने ।
रगतद्वारा शरीरमा अक्सिजनको प्रवाह हुने गर्छ । तर, शरीरमा अक्सिजनको प्रवाह गर्ने रगतको कमी भएमा त्यसलाई रक्तअल्पता वा एनिमिया भन्ने गरिन्छ ।
एनिमिया भएमा रगतले शरीरमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको आपूर्ति गर्न सक्दैन, जसका कारण मानिसलाई सास फुल्ने समस्या हुने गर्छ ।
धेरै मानिसमा मोटोपनको समस्या हुन्छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६को तथ्यांकअनुसार नेपालमा मात्र १५ देखि ४९ वर्ष समूहका करिब २२ प्रतिशत महिला र १७ प्रतिशत पुरुष मोटोपनको शिकार छन् ।
गलत खानपान, विलासी जीवनशैली तथा व्यायामको कमी पनि यसका प्रमुख कारण हुन् । मोटोपना भएमा शरीरमा अतिरिक्त बोसोका साथमा अतिरिक्त तरल पदार्थ वा पानीको मात्रा बढ्ने गर्छ । शरीरमा अतिरिक्त तौल बढेमा हिँड्न कठिनाइ हुने र सास फुल्ने गर्छ ।
परिणामस्वरुप, मोटा मानिसहरुलाई भर्‍याङ चढ्दा, उकालो लाग्दा तथा छिटो-छिटो हिँड्दा स्वाँस्वाँ हुने गर्छ । त्यस्ता मानिसलाई चिकित्सकहरुले तौल घटाउन सुझाउने गरेका छन् ।
मोटोपना मात्र नभई मृगौलासम्बन्धि रोगका कारण पनि मानिसलाई सास फुल्ने समस्या देखिन्छ । खासगरी, मृगौला रोगबाट पीडित मानिसहरु छिटो हिँड्दा, दौडिँदा र भर्‍याङ चढ्दा सास फुल्ने समस्या हुन्छ ।
मुटुसम्बन्धि समस्या भएको मानिसको मुटु कमजोर हुने गर्छ । त्यसका कारण मुटुले अतिरिक्त भार सहन सक्दैन । र, सास फुल्ने समस्या हुने गर्छ ।
त्यति मात्र होइन, कुनै कारणवस मुटुमा समस्या भएमा पनि राम्ररी रगतलाई पम्प गर्न सक्दैन । सोही कारण मुटु र फोक्सोको सन्तुलन बिगि्रन्छ । र, फोक्सोमा दबाब उत्पन्न भई सास फुल्ने समस्या उत्पन्न हुने गर्छ ।
यस्तै, जन्मजात मुटु रोग भएमा पनि शरीरमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको आपूर्ति हुन नसकी शरीर नीलो पर्ने, हातका औंला र ओठ नीलो हुने तथा सास फुल्ने गर्छ ।
सास फुल्ने समस्या नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबैभन्दा पहिले यसबारे जान्न जरुरी छ । यस्तै, छातीको एक्सरे, सिटी स्क्यान, रगतको जाँचद्वारा पनि यसको उपचार गर्न सकिन्छ ।
यदि यो समस्या फोक्सोका कारण भएको हो भने सम्बन्धित चिकित्सकको परामर्श र उपचार आवश्यक हुन्छ । छाती रोग विशेषज्ञबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ । समस्या मुटुको रहेछ भने मुटु रोग विशेषज्ञसँग परामर्श र उपचार गराउनुपर्छ ।